कठै बरा नेपालः स्वास्थ्यमा लापरबाही स् उपचारमा कमिसनको जालो ! | Rajmarga
कठै बरा नेपालः स्वास्थ्यमा लापरबाही स् उपचारमा कमिसनको जालो !
काठमाडौ । तपाईं एक्कासि बिरामी हुनुभयो र एम्बुलेन्स बोलाउनुभयो भने त्यसका चालकले चाहेको अस्पतालतिर लैजान सक्छन् ।
तपाईंले आफैं अस्पताल छान्नुभयो भने उनले तर्क दिएर ‘त्यही अस्पताल राम्रो’ भन्न सक्छन् । त्यति गर्दा पनि मान्नुभएन भने ट्राफिक जाम वा अन्य कुनै बहाना देखाएर आफ्नै रोजाइतर्फ लैजान जोड गर्न सक्छन् ।
उपचार विधिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको जनाउँदै डा. श्रेष्ठले शल्यक्रिया गर्दा यति प्रतिशत दिने, आईसीयूमा पठाएबापत यति दिने, निजीमा बिरामी ल्याउने एम्बुलेन्सलाई उति दिनेजस्ता विकृतिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डामाडोल पार्न लागेको बताए । ‘ कान्तिपुरमा खबर छ।
Previous post: यस्तो बन्दै छ एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको संरचना
Next post: अमेरिकाको बन्दुक मोहः यसरी उत्रिए लाखौ नागरिक बन्दुकविरुद्ध सडकमा